HCC : La clé de l’ouverture à Iavoloha - ewa.mg
News - HCC : La clé de l’ouverture à Iavoloha
L’article HCC : La clé de l’ouverture à Iavoloha est apparu en premier sur Midi Madagasikara.
L’article HCC : La clé de l’ouverture à Iavoloha a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Nivoaka tamin'ny : 31/03/2021
Zava-dehibe ho an’ny orinasa ny fampiharana ny RSE na « Responsabilité sociale des entreprises ». Fomba iray hanehoana fa tsy mijanona amin’ny fampiroboroboana ny orinasa fotsiny ihany ny RSE. Izany indrindra no namoronana ny salon de la Responsabilité sociale des entreprises et des initiatives pour le Développement Durable (RSE-IDD) ho fandresena lahatra ny orinasa eto Madagasikara mba Fandresena lahatra ireo orinasa handray anjara amin’ny fanampiana ny maha olona sy amin’ny fiarovana ny tontolo iainana. Nanomboka omaly 3 jolay ary hifarana androany 4 jolay 2019 eny amin’ny « The Station » Soarano, Café de La Gare teo aloha ny Salon RSE-IDD, andiany fahaefatra. Mpanohana ity hetsika ity ny orinasam-pifandraisan-davitra, Orange Madagasikara. Lohalaharana amin’ny orinasa ny fandraisana andraikitra amin’ny lafiny ara-tsosialy mba ho fanantanterahana ny politikan’ny fampandrosoana maharitra. Mampahafantatra ny fandaharan’asany amin’ny lafiny sosialy eny amin’ny salon ny Orange ka anisan’izany ny fampivoarana ny fanabeazana nomerika amin’ny alalan’ny Orange School, ny fanajana ny maha olona eny amin’ny tontolon’ny asa, ny fanampiana ny tanora mpandraharaha ary ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Nirina R. Cet article ORANGE: Mandray anjara feno amin’ny fanampiana ny mpiara-belona est apparu en premier sur déliremadagascar.
Mangataka fanitsiana. Nanatanteraka kongresy ny mpandrefy tany mpahay raha manao asa tsy miankina eto Madagasikara ( Géomètres experts privés de Madagascar) ny 25 Martsa 2021 teny anosy. « Mba tsy hisian’ny fisaraham-bazana eo aminay géomètres experts manao asa mahaleo tena ary tsy hisian’izany eo amin’ireo namanay ao amin’ny géomètres mpiasam-panjakana dia mangataka ny hamerenana ny làlana laharana 03-2020/PL any amin’ny fivoriam-be ho atao rahampitso Zoma 26 Martsa 2021 eny amin’ny CCI Ivato izahay », hoy ny filohan’ny kongresin’ny géomètres experts privés, Raharimandimbiraibe Pierrot. Io làlana io dia efa lany teny amin’ny antenimierampirenena ny 03 Novambra 2020 ka efa eny amin’ny antenimierandoholona ankehitriny. Tsy maintsy mandalo fivoriam-be tsy ara-potoana na fivoriam-be ara-potoana ny fandrafetana làlana na fanitsiana làlana mifehy azy ireo araka ny làlana laharana 2011-005 tamin’ny 01 Aogositra 2011 andininy 21-22-23. Noho izany dia mangataka an’ireo loholon’i Madagasikara izy ireo mba handray izay tapaka sy eken’ny rehetra eny amin’ny fivoriamben’ny mpandrefy tany amin’ny mety ho fanitsiana io làlana N°03-2020/PL io. Raha nambaran’izy ireo hatrany dia tsy nifampierana ny famolavolana io làlana io fa ny géomètre, mpiasam-panjakana ao amin’ny « topo » no nanao io volavolan-dàlana izay efa lany teny amin’ny antenimierampirenena io. Ny fiantraikan’io làlana N°03-2020/PL io raha toa ka tsy ahitsy dia afaka mifaninana ny géometres experts privés ny géometre mpiasam-panjakana kanefa izy ireo efa mpiasam-panjakana mandray karama sy tombotsoa isan-karazany any amin’ny fanjakana. Nomarihan’i Raharimandimbiraibe Pierrot fa ny géomètres experts privés dia mandoa hetra amin’ny maha tsy miankina azy ary ny asa ataony no miantoka ny karama raisiny. Manafoana tanteraka ny làlana N°2011-005 tamin’ny 01 aogositra 2011 mifehy ireto géomètres experts privés ireto ity làlana N°03-2020/PL ity, hoy hatrany izy. Ra-Nirina Cet article GEOMETRES EXPERTS PRIVES DE MADAGASCAR : Hitondra volavolam-panitsiana ho an’ ilay làlana N°03-2020/PL. est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article GEOMETRES EXPERTS PRIVES DE MADAGASCAR : Hitondra volavolam-panitsiana ho an’ ilay làlana N°03-2020/PL. a été récupéré chez Délire Madagascar.
Mahamasina : Fanazaran-tena 26 jiona : « parachutistes » telo naratra
Nentina haingana tao amin’ny hopitaly Hjra izy ireo mba hitsaboana azy. Omaly tolakandro nandritra ny fanazaran-tena faramparany ho an’ireo mpilatsaka amin’ny elon’aina no nitranga ny loza. Tsy mbola nisy ny fanazavana ofisialy momba izay mety ho antony. Na izany aza, dia re fa nifandona teny ambony teny ireo miaramila telo. Azo heverina fa nifanakaiky loatra ny elanelana teo amin’izy ireo ary nifandona tsy nahy. Nisy akony anefa izany tamin’ny fitsambikininana narahina sidina izay natao, indrindra koa tamin’ny filatsahana amin’ny tany. Ny roa no tena voa mafy ary voatery nanafarana « ambulance » maika mba hanavotana azy ireo ao anatin’ny fotoana fohy. Marobe ny fanontaniana izay napetraky ny olona mahakasika ity loza ity, indrindra koa nisy nanaparitaka tamin’ny tambajotra sosialy ny zava-nisy. Moa ve mbola mifanaraka amin’ny toetr’andro ny fitaovana ampiasaina ? Aiza ho aiza ny kalitaon’ny fampiofanana ? Raha ny zava-misy tokoa mantsy, dia isan’ny Tafika tsy manana fiaramanidina ny antsika. Raha tsy misy ary io fitaovana io, inona izany no hitondra ireo mpilatsaka amin’ny elon’aina eny ambony eny ? Mazava hoazy, ankoatr’izay ezaka kely hatao rehefa akaiky ny matso ka mety hanofana fiaramanidina ary hamoahana indray ny « parachute » izay efa tsara pirina. Mila jeren’ny mpitondra akaiky. D.RL’article Mahamasina : Fanazaran-tena 26 jiona : « parachutistes » telo naratra a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Famatsiana fanafody :: Nahazo vonjy ireo CSB 29 eto an-drenivohitra
Nitondra vahaolana vonjimaika manoloana ny fahalanian’ny tahirim-panafody fitsaboana an’ireo mararin’ny Covid-19, eny amin’ny toby fitsaboana fototra (CSB) ny fikambanana Fitia sy ny Fiadidiana ny repoblika, tamin’ny alalan’ny famatsiana Hydroxychloroquine sy Azythromycine an’ aliny, afak’omaly. Notsi-njaraina any amin’ireo CSB miisa sivy amby roapolo eto an-dreni vohitra ireo fanafody io. “Tohana ho an’ny marary, izay afaka misitraka fanafody maimaim-poana izao hetsika izao. Mila manaja hatrany ny torolalana homen’ny mpitsabo kosa ny marary mba hialana amin’ny vokadratsy mety hateraky ny fihinanana ny fanafody amin’ny fatra mihoatra ny tokony ho izy”, hoy ny filohan’ny fikambanana Fitia, Rajoelina Mialy. L’article Famatsiana fanafody :: Nahazo vonjy ireo CSB 29 eto an-drenivohitra est apparu en premier sur AoRaha.
Fifaninanana hidirana ao amin’ny Acmil: Hasiana “camera de surveillance” ireo foibem-panadinana
Ady amin’ny kolikoly! Notanterahina teny amin’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena Ampahibe, omaly, ny fifanekem-piaraha-miasa tamin’ny alalan’ny fanaovan-tsonia teo amin’ny Bianco sy ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena ary ny minisiteran’ny Asa, ny fampananana asa, ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy momba ny fikarakarana ny fifaninanana hidirana ho mpianatra manamboninahitra ao amin’ny Akademia miaramila (Acmil) Antsirabe, andiany faha-43. Nanamafy ny tale jeneralin’ny Bianco fa nifanaiky izy ireo amin’ny hampadio ny fifaninanana satria efa ao anatin’ny paikadim-pirenena rahateo ny ady amin’ny kolikoly. Nambarany fa tsy maintsy sorohina ny fomba rehetra tsy hisian’ny kolikoly mandritra ny fifaninanana ka mba toe-tsaina milamina ny hoentin’ireo mifaninana hiatrika ny fifaninanana hidirana ao amin’ny Acmil. Nambaran’ny tale misahana ny fikirakirana ny mpiasa eo anivon’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena, ny Jly Trangavelo, kosa fa hametrahana “camera de surveillance” amin’ireo foibem-panadinana isaky ny faritany sy ireo efitrano hitsarana ny fanadinana. “Hampitoviana ny herijikan’ireo mpiadina mba tsy ho zary raiki-tampisaka ao an-tsain’ny mpiadina intsony ny hoe atao fotsiny ny fanadinana fa efa fantatra ny lisitr’ireo afaka amin’izany”, hoy hatrany izy. “Asongadintsika hatrany ny mangarahara hananantsika manamboninahitra mendrika”, hoy kosa ny Sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena. Marihina fa miisa 72 ireo mpianatra ho manamboninahitra horaisina amin’ity andiany manaraka ity.Jean ClaudeL’article Fifaninanana hidirana ao amin’ny Acmil: Hasiana “camera de surveillance” ireo foibem-panadinana a été récupéré chez Newsmada.